Ekipan-dRajoelina :RATSY FIAFARA … -
AccueilRaharaham-pirenenaEkipan-dRajoelina :RATSY FIAFARA …
26/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Na mikorosy fahana na ianjadian’ny olana ara-pianakaviana mahery vaika ny ankamaroan’ireo mpanao politika akaiky an-dRajoelina. Lava dia lava ny lisitra saingy ny vitsivitsy amin’izy ireo aloha no hotanisaina etsy ambany. Tsotra ny antony : manody ny ran’ireo Malagasy tsy nanan-tsiny lavo tamin’ireny fanonganam-panjakana 2009 ireny. Tena manan-jina sy manan-kasina tokoa ny Malagasy ka na tsy mivaly eo noho eo aza ny fampahoriana hatao aminy, dia tsy maintsy mivaly any aoriana any.
Rajoelina Andry, izy tenany aloha dia efa milanja ny sazy tsy azo fafaina eo an-tampon-dohany eo. Tsy inona akory io sazy io fa ny tsy faneken’ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny hilatsahany intsony. Tsy eken’ny fifanarahana iraisam-pirenena ( vondrona afrikana, fifanarahan’i Cotonou, Firenena mikambana, Sadc, sns…) maro ny maha kandida ny olona nanongam-panjakana.
Nanompo an-dRajoelina Andry mihitsy izany Augustin Andriamananoro izany fa dia tampoka teo dia nidoboka am-ponja. Nihinam-be tamin’ny Tetezamita izy io. Nitazona ny toeran’ny minisitra nisahana ny Fifandraisan-davitra sy ny Paositra ary efa nahavita tranobe goavana eny Faliarivo Alakamisy. Lehiben’ny Fis ( Herim-pamoretana manokana) tamin’ny andron’ny Tetezamita izany Lylyson izany ary tena nitsoka ny mafana sy ny mangatsiaka. Firifiry ny “bavure” nataony ary tena nisy nitsangana nitory azy mihitsy saingy rehefa norahonany dia nifitsaka toa ny saka. Rehefa lany senatera moa izy dia nijoro ho tena akaiky an-dRajoelina ka dia iny : ratsy fiafara iny koa. Mandraka androany tsy sahy miseho masoandro ! Izany Alain Ramaroson , Cst tamin’ny andron-dRajoelina ary nampiseho ny fahefany tokoa tamin’ny fananany “gros bras” maromaro. Tena nampitaraina olona maro anie ny herisetran’izany mpanao politika izany. Nisy nitory momba ny raharaha fanofana fiara Alain Ramaroson fa ilay mpitory indray no sahirana. Kapaina tsy hita fery no fiheverany ny tenany. Saingy tany amin’ny raharaham-pianakaviany no nampidoboka am-ponja azy.
Nanana ny heriny anie izany Hajo Andrianainarivelo izany ka na ny nanangana télé sy Radio aza dia vitany tao anatin’ny indray mipi-maso. Tsy naharesy azy ny minisiteran’ny Fifandraisana nanameloka ny fihoaram-pefy sy ny tsy fanarahan-dalàna nataony tamin’izany. Nampiasainy mihitsy moa ny anarana naha Vpm ( vice- premier ministre) azy nataony anaran’ny vondron’antokony. Izao anefa “ratsy fiafara”. Nitsoaka avokoa ny depiote niara-dia azy. Narefo sy tsy manana hery intsony. Mandadilady mitady fihaonana an-kerisetra eny amin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena satria tena lany vatsy, tena reraka tanteraka.
“Dame de Fer” no anara-petaka niantsoana an’izany Christine Razanamahasoa izany fony izy minisitry ny Fitsarana. Hentitra izany, henjana izany, saingy tsy nahita mangirana akory anefa rehefa nilatsaka hofidian’ny vahoaka. Ben’ny tanàna aza tsy vitany. Hatramin’izao dia mbola midongy mipetraka amin’ny tranom-panjakana.
Andry Rajoelina : Tokony hosaziana
Mazava tanteraka ny lalàna ao amin’ ny andininy faha -208, mifehy ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka fa “ ireo olona rehetra manao ny asa ambony, na ny asam-panjakana ambony, sivily sy miaramila, kandidà amin’ ...Tohiny
Filoham-pirenena tao amin’ny Palais des Sport Mahamasina : “ Manana andraikitra hanavotra aina isika….”